निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिले समस्या भएको छ | गृहपृष्ठ
As of 2018-06-24 11:20:21
PIC 1180 (44) (10)
Home अन्तरवार्ता निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिले समस्या भएको छ
अन्तरवार्ता 120 views
निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिले समस्या भएको छ
सञ्जीव न्यौपाने प्रबन्ध निर्देशक, अपी पावर कम्पनी लिमिटेड
अपी पावरको यात्रा कस्तो छ ?
विगत २ वर्षदेखि नौगड गाढ (८.५ मेवा) आयोजना चलाइरहेका छौं । सुदूरपश्चिमकै पहिलो विद्युत् आयोजनाका रूपमा यसको स्थापना भएको हो । यसले गर्दा सो क्षेत्रमा स–साना उद्योग सञ्चालन हुनुका साथै गाउँहरूमा बत्ती बलेको देख्दा खुशी लाग्छ । ३३ केभी प्रसारण लाइनमा चार्ज गरिएको उक्त आयोजनाको विद्युत् घाम, पानी, हावा आदिले ट्रिप भइरहने समस्या थियो । अब भने चमेलिया (३० मेवा)को स्थापनासँगै सञ्चालनमा ल्याइएको अत्तरिया–बलाँच (१३२ केभी)मा छिरेर ट्रिपको समस्याबाट मुक्त हुने क्रममा छौं । अपर नौगड गाढ (८ मेवा)को परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पनि बलाँचमै लगेर जोड्छौं । त्यसैगरी माथिल्लो चमेलिया (४० मेवा)को सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएर पीपीएको क्रममा छौं । यो अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना भएकोले धेरै छलफलपछि बल्ल बल्ल स्वीकृति पाउन सफल भएका छौं ।
त्यसैगरी सोलारमा पनि लागेका छौं । विण्ड पावर (वायु ऊर्जा) पनि डेमोका रूपमा १ मेवा राख्न सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरिएको छ । हामीले पनि सरकारले जस्तै इनर्जी मिक्सको सिद्धान्त लिएका छौं ।
सोलार परियोजना त खरीद दरको विषयले अड्किएको छ नि ?
६ महीनाभित्र प्राधिकरणले सोलारका प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६१ पैसा र ७ रुपैयाँ ३० पैसाका गरी दुईओटा खरीद दर निकाल्यो । ऊर्जा मन्त्रालय तथा ऊर्जाक्षेत्रका विज्ञहरूले बनाएको यो दर ६ महीनाभित्रै कसरी यति फरक पर्‍यो ? फरक पर्नुका आधार के के हुन् ? नखुलाई दर परिवर्तन गरिएको छ । ९ रुपैयाँ ६१ पैसाको बेञ्चमार्कमा गरिएको बोलपत्र आह्वान (बिडिङ)मा आवेदन दिने चिनियाँ, भारतीय र नेपाली कम्पनी थिए । त्यति बेला हामीले यो बेञ्चमार्कबाट घटाघटमा गर्दा मुनाफा हुन्छ भन्दा मानिसहरू हाँस्थे ।
त्यसपछि यसबारे अध्ययन गर्न म गुजरात, राजस्थान, चीन गएँ र सोलारका प्यानल उत्पादन भएको ठाउँ, जडान भएको ठाउँ हेरेर आएँ । नेपालको सोलार रेडिएशनसम्बन्धी नासाका डाटा किनेर पनि हेरेँ । प्राविधिक र वित्तीय दुवै दृष्टिबाट मुनाफा हुने देखियो । बिडिङबाट हामीलाई ८ रुपैयाँ ३५ पैसादेखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्मको दरमा परेको छ । अहिले आएर त्यही दरमा पीपीए गर्नु राष्ट्रघाती छ भन्छन् । कम्तीमा एउटा परियोजना गरिसकेपछि थाहा हुन्थ्यो, हुने कि नहुने भनेर । एउटै परियोजना नगरी अनुमानकै भरमा अड्काइएको छ । दोस्रो कुरा, बिडिङ गर्नुभन्दा पहिला सोलारका नीति किन बनेनन् ? ग्रिड कनेक्शन सम्झौतासम्म सबै गरिसकेपछि पीपीए रोकेर राखिएको छ । यहीबीच निवर्तमान ऊर्जामन्त्री (कमल थापा)ले पूर्व निर्धारित दरमै पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसैले, यसमा सकारात्मक निर्णय हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
आयोजनाका प्रवर्द्धकका लागि प्रसारण लाइनका मुख्य समस्या के के हुन् ?
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका आधारमा त्यही परिमाणमा प्रसारण लाइन बनिरहेका छैनन् । प्रसारण लाइनको विस्तारमा बोटल नेक छ । विद्युत् गृहको नजीकैबाट राज्यले निर्माण गरेको एउटा लाइन गएको छ र यदि हाम्रो बिजुली त्यहाँभित्र घुसाउन (लूप–इन÷लूप–आउट) सके फेरि अर्को लाइन तानेर सबस्टेशन लैजानु पर्दैनथ्यो । प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत बरु आयोजनाले सबस्टेशन बनाएर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा तारका जङ्गल नहुने, जग्गा प्राप्तिका समस्या हट्ने र प्राधिकरणलाई पनि सबस्टेशन बनाउने लागत घट्ने जस्ता फाइदा हुन्छ । यसका लागि पहिले नीति आउनुपर्‍यो ।
बजार तथा बस्ती भएर प्राधिकरणले पहिले नै कतिपय प्रसारण लाइन लगिसकेका ठाउँ छन् । त्यस्तोमा निजीक्षेत्रले आफ्नो बिजुली टावर थपेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । त्यो नभएर भएकै टावरमा कण्डक्टर थपेर तीनओटा तारलाई आर्मरिङ गरिएको एउटा मुठो तार त्यही टावरमा बेर्दै लैजान पाए एउटै संरचनाले पुग्थ्यो । बस्ती पनि कुरूप हुनबाट जोगिन्थ्यो ।
कोरिडोरको प्रसारण लाइनको समस्या के कस्तो छ ?
यो एउटा उठाउनैपर्ने विषय बनेको छ । मेची होस् कि काबेली कोरिडोर होस्, समस्या उस्तै छ । त्यसमा पनि काबेली कोरिडोरमा त प्रसारण लाइनको अभावले उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिए यस्तो समस्या नै आउँदैन । यो एउटा चीज चाहिँ किन निजीकरण हुँदैन, बुझ्न सकिएको छैन । ४ सय ४० केभीका परियोजना राज्य आफैले गर्नुपर्छ । त्योभन्दा मुनिका प्रसारण लाइनका परियोजना यति समयमा बनाइसक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा तोकेर निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । काबेली कोरिडोरको प्रसारण लाइन बनाउन दिने हो भने हामी बनाउँथ्यौं । स्थानीयको समस्या पनि मिलाउँथ्यौं । हाम्रा दुईओटा जलविद्युत् परियोजना पनि त्यही कोरिडोरमा छन् ।
नीतिगत सुधारका लागि के कस्ता कार्य हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
आयोजना विकासका सन्दर्भमा ऊर्जामन्त्रीहरूको वक्तव्यमा ‘वान विण्डो पोलिसी’ भनेको धेरै सुनियो । तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन । मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणबीच समन्वय नभएको हो कि भन्ने महसूस अझै पनि भइरहेको छ । सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएदेखि पीपीए हात पार्दाबीचका बाधा कम भएका छैनन् । एउटै डेस्कबाट सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म लागू भएको छैन । वनको एउटा रूख काट्नुपर्‍यो भने मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । एकातिर निजीक्षेत्रको विकासका कुरा र अर्कातिर सोही क्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिले समस्या सृजना गरेको छ ।
७ असार २०७५, बिहीबार ०८:३९